Dawlada Taagta Daran Ee Somalia Iyo Wasiiro Ka socda Dawlada Kenya Oo Ku Heshiiyay Inay La Dagaalamaan Al-shabaab Iyo Qarax Ka Dhacay Muqdisho | Araweelo News Network (Archive) -
Dawlada Taagta Daran Ee Somalia Iyo Wasiiro Ka socda Dawlada Kenya Oo Ku Heshiiyay Inay La Dagaalamaan Al-shabaab Iyo Qarax Ka Dhacay Muqdisho
Muqdisho(ANN) Wasiirrada arrimaha dibedda iyo gaashaandhiga ee dowladda Kenya ayaa maanta booqasho ku tagay Muqdisho, waxayna kulamo kula yeesheen Villa Somalia masuuliyiinta dowladda taagta daran ee Soomaaliya. Kullamadaa kaddib ayay saxaafadda u sheegeen in labada dhinac ay
ku heshiiyeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen mid halis ku ah amniga Somalia iyo waliba dalka Kenya.
Wasiirka Arrimaha Debadda ee Kenya, Moses Watangula, ayaa shalay xaqiijiyay in ciidammada dalka Kenya ay galeen gudaha dhulka Soomaaliya, wuxuuna ku macneeyay talaabadaa mid ay ku difaacayaan dalkooda oo ay kula dagaallamayaan sida uu sheegay Al -Shabaab. Laakiin wasiirkaa oo maanta hogaaniyay wefdiga Kenya ee kulamada kula yeeshay Masuuliyiinta dawladda taagta daran magaalada Muqdisho, waxay Labada dhinacba beeniyeen in ciidamo ka socda Kenya ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya, balse waxay xuseen in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu soo tababaray Kenya ay yihiin kuwa haatan dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab ee deeggaannada u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Dhinaca kale Baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa maanta lagu qarxiyay duleedka dhismaha wasaaradii hore ee arrimaha debeda oo dib u habayn lagu sameeyay. Kadib markii Qof naftii hure ahi u adeegsaday baabuurkaa inuu isku qarxiyo. Qaraxaa waxa ku dhintay ugu yaraan afar qof oo uu ku jiro qofkii is qarxiyay, kow iyo toban kalena way dhaawacmeen, balse waxa loo malaynayaa inay dhimashadu intaa ka badato, maadaama uu qaraxu ka dhacay goob wado laami ah oo suuq saxmad ah.
Ma jirto cid ilaa hada sheegtay inay ka danbeeyeen qaraxaa, kaas oo kusoo beegmay iyadoo wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga ee Kenya ay wadahadalo kula lahaayeen xarunta dawladda taagta daran ee Villa Somaaliya.
Ciidamada dalka Kenya ayaa ka talaabay oo galay gudaha Soomaaliya Axadii todobaadkan, waxayna dawladda Kenya talaabadaa ku macnasay mid ay kula dagaalamayaan A-lshabaab oo ay ku eedeeyeen Afduubka dadka ajnabiga ah, waxayna wararka ka imanaya deegaanka Koonfurta Soomaaliya sheegayaan in Ciidamada Kenya oo taageeraya ciidamo Soomaali ah ay u sii socdaan dhinaca Magaalada Afmadow.
Dhinaca kale Al-shabaab ayaa talaabada dawladda Kenya ku tilmaantay mid xad gudub ah, iyagoo ku hanjabay in aanay Kenya ka dhisnaanayn daaraha dhaadheeri oo ay weeri doonaan haddii aanay uga bixin dalkooda.